Covid - Kalifoorniya Kalifoorniya
Fadlan halkan ka eeg si isdaba joog ah wixii cusboonaysiin ah ee ku saabsan California Protons iyo taxadarka aan qaadno si aan si nabdoon ugu sii wadno daweynta halka shaqaalahayaga iyo bukaannadaba caafimaad qabno. Macluumaadka si joogto ah ayaa loo cusboonaysiin doonaa.
Joog guriga Amarka
Khamiista, Maarso 19, 2020, Guddoomiyaha Gobolka California Gavin Newsom wuxuu si rasmi ah u soo saaray amar ah “joog guriga” amar si dhakhso leh isla markiiba. Tani waa dadaalkii ugu dambeeyay ee Gobolka ee lagula dagaallamayo faafitaanka coronavirus.
Waxaan rabnaa inaan ku xaqiijinno inaan u furan nahay daaweynta bukaanka.
Xarunta Caafimaadka Kansarka ee 'Protons Cancer Therapy Center' waxay soo saartey warqad bukaanada hadda jira oo ku xusan inay haatan ku daweenayaan Xaruntayaga. Hadaad tahay bukaanka hada, waxaan kaa codsaneynaa inaad fadlan sidato adiga oo sidda aad ugu safreyso ama aad uga tageysid ballamahaaga maalinlaha ah. Haddii aadan awood u lahayn inaad daabacdo tan, koobi-nuqul ayaa lagugu siin karaa miiska hore ee Xarunta.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan wac Xarunta Daaweynta Kansarka Kaaliyaha ee California (858) 549-7400.
Ka taxaddarrayaasha Nabdoonaanta COVID-19
Sida badan oo idinka mid ah waad ogtihiin, waxaa jira walaac isa soo taraya oo ku saabsan fiditaanka fayraska COVID-19 (oo loo yaqaan “coronavirus”) ee beesheena. Muhiimadda koowaad ee Xarunta Daaweynta Kansarka Kansarka ee California Protons waa ilaalinta caafimaadka bukaanka iyo shaqaalaha. Waxaan si dhaw ula soconay xaalada, waxaana sii wadaynaa qiimeynta horumarka cusub waxaanna qaadaynaa talaabooyin ku habboon si wax looga qabto khataraha. Caafimaadkaaga iyo badbaadadaada ayaa ah ahmiyadeena koowaad. In kasta oo aysan jirin kiisas coronavirus ah oo ka dhaca California Protons, waxaan sii xoojinaynaa qawaaniintayada nabadgelyada si kastaba ha ahaatee.
Si looga hortago faafitaanka cudurka, waxaan sii wadaynaa inaan sare u qaadno nadaafadda wanaagsan oo ay ka mid tahay adeegsiga fayadhowrka gacmaha iyo dhaqidda gacmaha marwalba, ku dhaqmidda qaabsocodka keli keli ahaanta sida weydiinta bukaanka iyo booqdayaasha inay xirtaan maaskaro haddii ay leeyihiin astaamo neefsashada firfircoon, waxaan weydiisanaynaa in shaqaalaha jiran ay guriga ku sii jiraan, iyo nadaafadda meelaha adag ee ay ka mid yihiin qalabka daaweynta oo had iyo jeer la isticmaalo.
Marka lagu daro dhaqamadaan, waxaan dooneynay inaan kugu baraarujino isbedelada soo socda:
Baadhitaanka: Dhammaan bukaanada iyo shaqaalaha soo gala dhismaha waxaa laga baari doonaa maalin kasta sababaha halista iyo astaamaha u muuqda COVID-19. Haddii aad isku aragto qandho, qufac cusub, neefta oo kugu cusub, dhuun xanuun cusub, shuban, jir xanuun, ama dhadhamin la'aan ama urin, fadlan wac Xarunta (858) 549-7400 si aad u hesho tilmaam dheeraad ah oo ku saabsan ballantaada.
Qalabka Ilaalinta: Iyadoo la raacayo hoggaanka CDC iyo Caafimaadka San San Diego, shaqaaluhu waxay xidhayaan waji xidho inta lagu jiro kulamada bukaanka, ballamaha iyo daaweynta. Tani waxay u tahay badbaadadaada iyo ta kooxdeena labadaba.
Xaddidida Martida: Waqtigan xaadirka ah waxaan ka xakameyneynaa dhammaan booqdeyaasha (labada isqaba, kuwa kale ee waaweyn, qoyska, asxaabta, iwm) inay soo galaan dhismaheenna. Soo-booqdayaasha waa lagu soo dhaweynayaa inay sugaan bannaanka ama gaarigooda. Waxaan rajeyneynaa xayiraadaha booqdaha inay noqon doonaan kuwa ku meelgaar ah. Haddii aad haysato duruufo gaar ah oo aad ugu baahan tahay caawinaad dheeri ah, fadlan na soo ogeysii waxaanan ku dadaali doonnaa sidii aan ku qaabayn lahayn. Labada qof ee isqaba iyo kuwa kale ee muhiimka ah way ka qeyb qaadan karaan ballamaha taleefanka haddii la doonayo.
Dhacdooyinka kooxda: Sida ugu wanaagsan ee looga hortago faafitaanka fayraska waa in laga fogaado la kulanka qof-qof. Sidaas oo kale, Xaruntu waxay qaadatay go'aankii adkaa ee lagu joojinayay dhacdooyinka kooxeed qaarkood mustaqbalka la arki karo. Waan ognahay inay kuwani muhiim u yihiin bukaannadeenna wax laga xumaado ay tahay in dib loo dhigo, si kastaba ha noqotee, nabadgelyada bukaannadeenna ayaa ah ahmiyadeena ugu sareysa waxaanan aaminsanahay inay tahay tallaabo caqli-gal ah.
La-tashi Telefoon iyo Fiidiyow iyo La-socosho
In kasta oo wadatashiyada fool-ka-foolka ah lagu taliyay markii ay suurogal tahay, waxaan bilownay inaan ku bixinno la-talinno iyo ballamo la-socosho taleefan ama shir fiidiyoow ah. Haddii aadan ku qanacsaneyn imaatinka Xarunta, ama safarka, fadlan naga soo wac (858) 549-7400 si aad u ballansatid ballantaada.
Bukaanka qaba Calaamadaha COVID-19
Waqtigaan, California Protons waxay aad uga taxaddareysaa laxiriirta cudurka Coronavirus ee dhowaan dhacay. Bukaannadayadu waa kuwo is-difaaci kara sidaa darteedna, waa inaan qaadnaa dhammaan tallaabooyinka iyo taxadarka lagama maarmaanka u ah yareynta cudur kasta oo suurogal ah inay la xiriiraan.
Sidaas darteed, bukaan kasta, soo booqde, iibiyaha ama xubin kasta oo shaqaale ah oo la kulma astaamo (qandho, qufac, neefta oo cunta, cuna xanuun, sanka oo dareema, ama dareen guud oo ah in aan caafimaad qabin) waxay u baahan yihiin in la qiimeeyo dhakhtarkooda daryeelka aasaasiga ah ama maxalliga ah qolka xaaladaha degdegga ah. Xafiisyada daryeelka aasaasiga ah iyo qolalka gurmadka degdegga ah ee degmadu waxay labadaba weydiisanayaan inaad horay u soo wacdid si aad uga digto shaqaalaha astaamahaaga. Hoos waxaa ku taxan dhowr ikhtiyaar oo qiimeyn loogu sameyn karo agagaarka.
XASUUSNO: Haddii aad qabto nooc nooc walboo masiibo ah, fadlan isla markiiba wac 911, ama booqo qolka gurmadka ee kuugu dhow.
Waaxda Gargaarka Degdegga ah ee UC San Diego
Xarunta Caafimaadka 9434 Dr.
Khadka Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Scripps
Fadlan u tag dhaqtarkaaga qiimaynta oo na soo wac ka hor intaadan ku soo noqon Xarunta. Waxaan uga baahan doonaa dokumeenti dhaqtarkaaga in lagu qiimeeyo oo sheegaayo inaadan ku faafine cudurka Coronavirus.
Waad ku mahadsantahay fahamka inaan ka badbaadineyno bukaannadeenna iyo shaqaalaheena wixii cudur ah si aan u sii wadno inaan bukaannadeenna si ammaan ah ula dhaqanno.